iqembu Komphakathi (umphakathi) is ekhona ngempela, empirically iqoqo Ukwethwasa zabantu, esibonakala by ubuqotho futhi uba isihloko ezimele isinyathelo somphakathi futhi zomlando.
Ukuvela amaqembu ahlukahlukene social kwasekuqaleni elihlobene ne izenzakalo ezifana division yezenhlalakahle yokusikwa lunye imisebenzi, kanti eyesibili - nemibandela zomlando, izimo zokuphila, ngetenhlalo nemagugu futhi izinkambiso, namasiko.
Ngakho, omunye iqoqo abantu angabhekwa iqembu komphakathi, uma ababambiqhaza kufanele:
1. Ukufana izimo zokuphila.
2. Ukuba khona imisebenzi lwenteke ngokuhlanganyela.
3. commonality baba nezidingo ezithile.
4. isiko siqu.
5. Samoprichisleniem ngokwabo kule generality.
amaqembu Social nezinhlobo zabo nomumo ihlukanisa ukwehluka okungavamile. Ngakho, bangase kuzohluka futhi ukwakheka ambalwa (ezincane anda futhi eziningi), kanti isikhathi ukhona (iDemo - kusukela emizuzwini embalwa, futhi iyatholakala esitebeleni sekuyizinkulungwane zeminyaka), kanye nezinga ukuxhumana phakathi abahlanganyeli (ozinzile futhi okungahleliwe, ukwakheka amorphous).
Izinhlobo namaqembu omphakathi ngokuvumelana nenani
1. Amancane. Basuke izimpawu inombolo encane abahlanganyeli (esuka kubantu 2 kuya ku-30), okuyinto ngokuphelele ujwayelene nomunye futhi behileleke nakwezamabhizinisi imbangela ezivamile. Nebudlelwane band ngqo. Lezi zihlanganisa lezi zinhlobo ezilandelayo iyunithi amaseli emphakathini, njengomndeni, iqembu labangane, ekilasini esikoleni, amatilosi, njll
2. elikhulu. Ziyakwazi iqoqo eziningi zabantu ukuthi luthathe senhlalo futhi ube nesimo esifana maqondana lezi izithakazelo ezivamile. Izinhlobo namaqembu amakhulu nomphakathi: i stratum, ekilasini, isizwe, njll Kule ndaba, lokubolekwa ezinjalo kuba engaqondile, ngoba isibalo sabo sincane kakhulu.
Izinhlobo namaqembu omphakathi, kuncike ubunjalo nokuxhumana
1. Primary, lapho ukuxhumana wabahlanganyeli nomunye kuyinto ekuchumana, oqondile, lokusho usekelo uhlamvu. Izibonelo: kontanga iqembu, abangane, omakhelwane kuvulandi.
2. nokuxhumana kwesibili kungenxa impumelelo inhloso efanayo futhi kube okokugcina icala nje. Izibonelo: zabasebenzi, izimboni izinhlangano kanye nezombusazwe amaqembu.
Izinhlobo namaqembu omphakathi, kuncike ukhona
1. Okuzisholo emelela eyayenziwe izakhi labantu kubantu ngokukhethekile abelwe kwezibalo. Izibonelo: izitimela lwabagibeli, abagibeli, abathengi brand egeza ezithile powder.
2. Real Group, umbandela wempilo okuyizinto izici yangempela (engenayo, ubulili, ubudala, umsebenzi, ubuzwe, indawo yokuhlala). Izibonelo: abesifazane, amadoda, izingane, isiRashiya, abantu bakuleli dolobha, abantu bendawo, othisha, odokotela.
Izinhlobo namaqembu omphakathi kuye indlela inhlangano
1. amaqembu loluhlelekile zidalwe futhi sikhona kuphela izinhlangano ezihlukile kwezisemthethweni. Izibonelo: Ikilasi esikoleni, le football club "Dynamo".
2. lokungakahleleki ngokuvamile kuphakama futhi ukhona ngesisekelo izithakazelo siqu abahlanganyeli noma qondana noma awuvumelani kangakanani nalezitatimende imigomo amaqembu esisemthethweni. Izibonelo: umbuthano abathandi izinkondlo, fan club Bard.
Ngaphandle into ezifana iqembu nomphakathi, kukhona lokho okubizwa ngokuthi "quasigroup". Ziyakwazi engazinzile iqoqo lolungakahleleki abantu abavukwa, njengoba umthetho, isakhiwo ezingacacile, izinkambiso kanye namagugu. Izibonelo izilaleli (ihholo ekhonsathini, ukusebenza yaseshashalazini), zabalandeli, isixuku (rally fleshmob).
Ngakho, singasho ukuthi isihloko ubudlelwane emphakathini kweqiniso akuzona abantu bangempela, abantu ehlukene, kodwa isethi yamaqembu etindzaweni letihlukene tekuhlalisana, okuyinto nihlanganyele kanye kabani imigomo futhi izithakazelo bodwa, ngandlela-thile, aphambana.
Indlela "ukhiye" Khasaya Aliyev njengendlela ukuzithiba
Savvy. Kuyini savvy?
Reinin njengoba igama elisha kwezesayensi
Rufus Sewell: Biography, Filmography futhi ukuphila siqu umlingisi
Kusetshenziswe ukuqondanisa ashintshekayo emotweni
Ukugaya isondo ukubuyisela izakhiwo ahlabayo
Indlela yokwenza umhlobiso ebodeni ngezandla zabo?
Yiziphi amagciwane? Biology: izinhlobo kanye nokubekwa ngezigaba amagciwane
Biozavivka ukuze izinwele naphakathi: incazelo ubuchwepheshe, izici kanye nokubuyekeza